Kubatsira Vashandi Vepachipatara Kuti Vasanyanya Kuzvidya Mwoyo
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Azerbaijani Basque Bassa (Cameroon) Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga (Malawi) Chitumbuka Croatian Czech Danish Dutch Estonian Fijian Finnish French Galician German Greek Hiligaynon Hungarian Iban Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Korean Lithuanian Malagasy Malay Malayalam Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuChile Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuPoland Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Norwegian Oromo Persian Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Romanian Russian Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Thai Turkish Tzotzil Ukrainian Valencian Vietnamese
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa Kubatsira Vashandi Vepachipatara Kuti Vasanyanya Kuzvidya Mwoyo
Bryn, anogara kuNorth Carolina, iri kuU.S.A., anoshanda neKomiti Yekukurukura Nezvipatara iyo inoshanda pamwe chete nezvipatara pakubatsira Zvapupu zvaJehovha zvinenge zvichirwara.
Nemhaka yechirwere cheCOVID-19, zvipatara zvakawanda zvakanga zvisingabvumiri kuti vanhu vauye kuzoshanyira varwere. Bryn akafonera mumwe mukuru wepachipatara kuti azive kana aizokwanisa kukurukura nezvimwe Zvapupu zvaJehovha zvaiva muchipatara.
Akazokwanisa kutaura nemutevedzeri wemukuru wechipatara. Sezvo vanhu vaisakwanisa kushanya kuchipatara, Bryn akakumbira kuti nhamba dzake dzefoni dzipiwe Zvapupu zvaJehovha zvaiva muchipatara kuti azotaura navo uye vakabvuma.
Bryn akabva afungawo nezvevashandi vepachipatara ipapo. Akaudza mutevedzeri wemukuru wepachipatara kuti aionga chaizvo basa raiitwa pachipatara uye aivashuvira kuti vasabatwa nechirwere ichi. Akazotaurawo kuti akanga averenga kuti vanhu pasi rese, kunyanya vashandi vepazvipatara vari kutowedzera kuzvidya mwoyo nemhaka yechirwere cheCOVID-19.
Mutevedzeri wemukuru wepachipatara akamuudzawo kuti chirwere cheCOVID-19 chaiita kuti vanhu vari pachipatara chavo vatowedzera kuzvidya mwoyo.
Bryn akati: “Pawebsite yedu pane mashoko anogona kubatsira vanhu kuti vasanyanye kuzvidya mwoyo. Kana mukaenda pawebsite yejw.org moenda pakanzi Tsvaga, mononyora kuti “kuzvidya mwoyo,” muchawana nyaya dzakawanda dzinogona kubatsira vanhu vanoshanda pachipatara penyu.”
Vachiri kutotaura, akabva aenda pawebsite yedu achibva anonyora kuti “kuzvidya mwoyo” uye paakaona nyaya dzakabuda ipapo akabva ati: “Heyi! Ndicharatidzawo mukuru wangu. Ndinofunga kuti nyaya idzi dzingatobatsira vashandi vedu uyewo vamwe vari muchipatara. Ndichadziprinda ndozopawo vamwe.”
Papera mavhiki mashoma, Bryn akazotaura nemukuru wacho uyewo akamuudza kuti vakanga vakwanisa kuenda pawebsite uyewo vakaprinda nyaya dzaitaura nezvekuzvidya mwoyo nedzimwewo. Nyaya dzacho vakanga vatopa manesi nevamwe vanoshanda pachipatara ipapo.
Bryn akati: “Mukuru wacho akanditenda nezvebasa ratinoita uyewo nyaya dzavakadhaunirodha dzakanyatsonyorwa zvakanaka. Akataurawo kuti dzakanga dzabatsira chaizvo.”
Ona mazano ezvaungaita kuti usanyanya kushushikana kana kuti uderedze kushushikana.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Kubatsira Vashandi Vepachipatara Kuti Vasanyanya Kuzvidya Mwoyo
ijwex nyaya 20